Mibvunzo - FAQ - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Kambani - General
Quote & Injiniya
Kana ini ndine dambudziko dhizaini, chii chingaitwe naJWT Rubber kwandiri?
Usazeze kufonera yedu ine ruzivo yekutengesa kana dhipatimendi reinjiniya. Kana iwe uchida dhizaini rubatsiro kubva kune mainjiniya edu, ingo taura nesu.
Ndiri kushanda purojekiti nyowani. Ini ndinogona kuwana sampuli kubva kuJWT?
Ehe, isu tine chirongwa chinodhura-chinoshanda chemi prototypes uye zvidiki zvekumhanya. Ndokumbira utaure nekutengesa kwedu.
Ndezvipi zvinodiwa neJWT Rubber zvishoma odha?
Nekuti isu tinofanirwa kugadzira chikamu, iyo MOQ inoenderana nezvigadzirwa zvakasiyana.
Ndingauye kuzotarisa zvivakwa zvako?
Ehe, ndokumbira utifonere isu kuti tigadzire musangano wekushanya kana kutiongorora. Paunenge uri pano, isu tichafara kukuratidza yedu
yekugadzira chivakwa uye yedu Quality Kudzora dhipatimendi.
Uri kupi iwe?
Isu tiri Hapana # 39, Lianmei Yechipiri Road, Lotus Town, Tong 'an District, Xiamen City, Fujian province, China.
Ndinosangana sei newe?
Ndokumbira utumire general kubvunza pane yedu yepamhepo Kubata Fomu kana kutifonera pa +86 18046216971
Kana uine mimwe mibvunzo ndapota Bvunza Nyanzvi. Isu tinopindura kune edu ese epamhepo zvikumbiro mukati maawa makumi maviri nemana.
Une mainjiniya mumidonzvo here?
Ehe. Uye injiniya wedu ane ruzivo rwakawanda nerubatsiro rwekugadzira. Zvakare, matanda edu ese ane ruzivo rwakakodzera uye dzidziso yekukubatsira iwe mukusarudza chaiyo yerabha zvinhu kuti uwane zvaunoda.
JWT yakavambwa mu2010.
Yakakura sei kambani yako?
JWT yakadyara zvizere mamirioni gumi (RMB), uye ine nzvimbo yekudyara ye6500 mativi emamita, vashandi makumi maviri nevashanu, vachiri kuenderera ……
Nekuti zvigadzirwa zvese zvakagadzirwa, hushoma hwehuwandu hwehuwandu hunogona kutsanangurwa kusvika pazvinogona maererano nezvinodiwa kana kugadzirwa kana hunyanzvi kuri kushanda.
Unopa zvinhu here?
Isu hatisi vatengesi vezvinhu, zvisinei, isu tinogona kukwanisa kukubatsira iwe kuti usarudze yakanyanya kukodzera zvinhu zvezvigadzirwa zvako.
Ini ndinowana sei mutengo?
Tumira kubvunza kwako uye kudhirowa ku tech-info@jwtrubber.com, oem-team@jwtrubber.com kana kushanyira iyo Kumbira Quote chikamu Yedu webhusaiti.
Ndedzipi mhando dzenzvimbo dzerabha dzaunopa (semuenzaniso dzakabudiswa, dzakaumbwa, nezvimwewo)?
Isu tinopa tsika kuumbwa, extruded, kufa kucheka uye lathe akacheka zvikamu zverabha, pamwe nejekiseni repurasitiki.
Ndeapi marudzi akasiyana ezvishandiso anowanikwa kuJWT?
Isu tinoshanda nezvinhu zvinoverengeka zvakasiyana zvinhu, kusanganisira EPDM, neoprene, silicone, nitrile, butyl, SBR, isoprene (chakaita zvokugadzirwa dzinongoitika rabha), Viton®, yakaoma uye inochinja-chinja PVC, nemhando dzakasiyana dze chipanji rabha.
Ndeapi ruzivo iwe aunoda kuti uwane iyo chaiyo chaiyo quote inobvira?
Kuti uwane yakanyanya kunaka quote, iwe unofanirwa kupa: Huwandu, Zvinhu zvekufungidzira, uye kudhirowa kana tsananguro yechikamu cherabha.
Chii muitiro kuwana chitaurwa?
Ndokumbira upe kupurinda kana muenzaniso wechikamu chako kuti chiongororwe. Kuti ubatsire mukugadzira dhizaini, ndapota sanganisira yako inofungidzirwa huwandu hunodiwa. Ndokumbira utaridze izvo zvinhu, kana izvo zvinhu zvisina kutaurwa kana kusazivikanwa, ndapota tsanangura nharaunda maichashandiswa.
Inogona here JWT kubatsira nedhizaini yetsika yangu yerabha chikamu?
JWT inogona kubatsira muchikamu chekutanga dhizaini nzira yese kuburikidza nemvumo yako yekupedzisira yechikamu.
Ko kana ini ndisingazive iyo polymer kana durometer yakanyatsokodzera application yangu?
Yedu ruzivo tsika yerabha kuumba nyanzvi ichakubatsira iwe kuona chaiyo polymer yako kunyorera pamwe neyako durometer zvinodiwa.
Ndeipi inguva yekutungamira kana ini ndikaisa odha inoda chishandiso?
Ivhareji inotungamira-nguva yezviratidziro zvishandiso ndeye 2-4 mavhiki. Zvekugadzira compression tooling, iyo inotungamira-nguva iri mavhiki e4-6. The avhareji kugadzirwa rabha jekiseni Kuumbwa tooling ndiwo mavhiki 4-6. JWT inonzwisisa kuti panogona kunge paine zviitiko zvingangoda kuvandudzwa kwekushandisa tungamira-nguva uye isu tinoshanda neyedu yekushandisa shopu kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Midziyo yangu inogadzirwa kuChina?
JWT inotenga 100% yeiyo yekushandisa muChina iyo inobvumira kukurumidza kutungamira-nguva uye nekukurumidza mhinduro kune vatengi dhizaini shanduko.
Ndeipi JWT's spart lead-nguva?
Kubva pakugamuchira odha, zvinoenderana neodha yakawanda, zvikamu zvakawanda zvinogona kutumirwa pane zvaunoda muvhiki 3-4.
Kamwe ini kubhadhara rabha Kuumbwa tooling, ndiani muridzi tooling?
Tooling itsika kune yedu mutengi dhizaini uye saka chivakwa ndechavatengi vedu kana muripo wagamuchirwa.
Yerubha kune simbi yekubatanidza kunyorera inogona JWT kunhonga simbi yangu zvinhu?
JWT inoshanda nemaketani akati wandei ekupa simbi inodiwa yekudhinda kana kuisa nekukurumidza sezvatinogona.
Inogona here JWT kuenzanisa yangu yechinyakare mavara anodikanwa?
JWT inogona kuenderana chero ruvara rwakakumbirwa. Isu tinoshanda pamwe nevatengesi vedu veRabha kupa chaiyo machisa machisa.
Yako yekambani mhando yemhando ISO yakasimbiswa?
Nekudada, isu tiri. Chitupa chedu kune ISO zviyero zvave kushanda kubvira 2014.
Iwe unayo here kugona kuita rubber-kune-simbi kubatana?
Ehe. Saizi yetsika yerabha-kune-simbi yakasungirirwa zvikamu isu parizvino zvinopa huwandu kubva kune zvidiki - zvisingasviki 1 inch muhupamhi - kusvika pakakura kwazvo - anopfuura 1 tsoka pakureba kureba.
Ndeipi inotungamira nguva yemasampuli uye zvishandiso?
Iyo inotungamira nguva yekushandisa uye masampuli anowanzoita mavhiki mana kusvika matanhatu eimwe yakadzoserwa sampuro uye masvondo matanhatu kusvika masere eforoma uye masampuli.
Ndechipi chakakura chikamu uremu uye saizi iwe yaunogona kuita nesilicone jekiseni?
Tine 500T muchina kana fekitori yedu. Chikamu chakakura chehuremu hwezvinhu zvesilicone zvatinogona kugadzira i1.6kg, hukuru hukuru i60mm.
Unogona here kubatsira kuona yakakodzera polymer uye durometer yekushandisa kwangu?
Ehe, timu yedu ine ruzivo yehunyanzvi inogona kukutungamira mukusarudza iyo yakakodzera mhando yerabha kana polymer zvichienderana nekushandisa uye nharaunda chikamu chako chichafumurwa.
Ini handidi kutenga tooling, ndingawana sei zvikamu?
Zvizhinji zvezvikamu zviri kuzoda nyowani nyowani yekushandisa. Isu tinogona kunge tine zvimwe zvikamu zverabha izvo zvakajairika uye tooling yatove kuwanikwa. Iwe unofanirwa kutaura kune vashandi vedu kuti vakubatsire kuburikidza nemaitiro aya.
Ndeupi rudzi rwekushivirira kwaunogona kubatirira pane ako akakwenenzverwa marabha zvikamu?
Iko kushivirira kwenzvimbo dzedu dzakaburitswa dzerabha kunoenderana nesarudzo chaiyo. Tinogona kudzokorora zvakakodzera kushivirira kana iko kushanda kuchinge kwatarwa.
Ndeupi rudzi rwekushivirira kwaunogona kubata pane ako akafa akachekwa matabha zvikamu?
Zvichienderana nechikumbiro isu tinogona kutaurisa akakodzera shiviriro yeyako die cut rubber chikamu.
Ndeipi durometer yakaderera iwe yaunogona kugadzirisa?
Miganhu yeDurometer inoenderana nerudzi rwechikamu cherabha chaunoda:
Extruded zvikamu - 40 durometer
Zvikamu zvakaumbwa - 30 durometer
Ndeipi durometer yepamusoro iwe yaunogona kugadzirisa?
Extruded zvikamu - 80 durometer
Zvikamu zvakaumbwa - 90 durometer
Passive Radieta, Diki Aluminium Led Radieta, Radiator Rubber Gomo, Passive Bass Radieta, Radiator Rubber Isolators, Bass Radiator,